Ururka UBBO Ee Isku Magacaaba ONLF Oo Ay Qaramada Midoobay Shaaca Kaqaaday Xidhiidhka Kadhaxeeya Ururka Argagixisada Caalamiga Ah Ee Alshabaab. - Cakaara News
New York(CN) Jimce.24.Oct.2014, Sida la ogsoonyahay ururka UBBO ee isagu isku magacaaba ONLF ayaa wuxuu deegaanka Soomaalida Itoobiya ka gaystay xasuuq aad u farabadan, dhac, kufsi iyo dhibaatooyin aad u farabadan.
Dhibaatooyinkaas ayuu ururka UBBO taakulayn kaga helayay dawlada argagixisada ah ee Eretariya iyo ururka argagixisada caalamiga ah ee Alshabaab.
Jimciyada Quruumaha kadhaxaysa(UN) waxay samaysay baadhitaan qoto dheer oo ay muddo daba socotay wakhti iyo miisaaniyadna ku bixisay, kadibna waxay si dhab ah u ogaatay xidhiidhka ay leeyihiin ururka UBBO iyo argagixisada caalamiga ah ee Alshabaab.
Warbixintan ay soo saartay Qaramada Midoobay ayay kusoo dhigtay liiska 25 xubnood oo katirsan ururkaasi UBBO in ay kamid yihiin argagixisada islamarkaana wakhti xaadirkan laraadinayo xubnahaasi. Kuwaas oo lafilayo in laga qaado talaabo sharciya gaar ahaan dhanka dhaq-dhaqaaqa iyagoo lasheegay in ay haystaan dhalashooyin wadamada Yurub iyo Maraykanka.
Waxayna Qaramada Midoobay si dhab ah u xaqiijisay xidhiidhka kadhaxeeya ururka UBBO ee isku magacaaba ONLF iyo argagixisada caalamiga ah ee ururka ALshabaab. Sidoo kale waxaa iyaguna liiska warbixinta Qaramada Midoobay kujira 4 nin oo Eretariyaan ah.
Warbixintan Qaramada Midoobay ayay cidkasta si dhab ah u xaqiijinaysaa kadib cadaymaha ay soo dhigayso qaramada midoobay. Waxaana tusaale dhaba u ah dagaaladii ciidamada Liyuu Polisku ay kula galeen deegaanka Aato Alshabaab iyo UBBO wadajir ah badhtamihii sanadkan 2014, taasina ay ahayd mid caalamku makhraati kayahay.
Liiska magacda xubnaha kujira warbixinta qaramada midoobay:-
1-Mohamed Umar Osman
2-Mohamed Umar Ismail
3-Mohamed Abdi Yasin
5-Dr Ibado Hirsi
6-Mohamed Nuur Abbas
9-Abdukadir Sheik Hassan Hirmoge
11-Abdukarim Sheik Musse
13-Ali Ahmed Hussein
21-Professor Mohamed Wadi
Liiska Eretariyaanka: 1-Yemane Gebreab, 2-Abraha Kassa, 3-Colonel Nagash mussa, 4-Esiyas Afework.
Fahfaahinta warbixinta Qarmada Midoobay ayaan falan-qaynteeda dib idin kalasoo socodsiin doonaa.